Best fety tany Eoropa sy aiza no ahitana azy ireo | Save A Train
Home > Travel Europe > Best fety tany Eoropa sy aiza no ahitana azy ireo
Fotoana hahazo ireo antoko sy stomping satroka amin'ny kiraro feno! Izahay amin'ny handrandraiko fety ho an'ny tsara indrindra tany Eoropa sy aiza no ahitana azy ireo. Moa ve ianao vonona ny antoko ny lalanao amin'ny alalan'ny Summer? 🙋🏻
Best Festivals in Eoropa: Creamfields, Daresbury, fanjakana Mitambatra
Creamfields dia iray amin'ireo tsara indrindra tany Eoropa fety sy ny lehibe indrindra UK dihy mozika festival. Ataovy indrindra ny banky fialan-tsasatra volana Aogositra sy ny boky tapakila amin'ny fety mega!
Efa nanokan-tena ho dingana trano, EDM, TECHNO, drum sy ny basse, azon-tsindrimandry, maloto, sy ny maro hafa, manao Creamfields ny handeha-to fetibe ho an'ny mpankafy mozika dihy in Grande-Bretagne.
Ny fetibe amin'ity taona 2019 ity dia miaraka amina haben'ny exclusivity. Izy ireo no ho ihany no hampiantrano ny dihy malaza supergroup book House Mafia ao amin'ny UK. Izy ireo ihany koa no mampiantrano Deadmau5 sy ny fanatanterahana ny Cirez voalohany D & Adam Beyer.
Join ny 70,000 ny olona izay hiverina Summer rehetra mankafy immersive dingana vaovao, Epic famokarana haavon'ny, jiro mampiseho, ary pyrotechnics.
Best Festivals in Eoropa: Primavera Sound 2019. Barcelona, Espaina
Be fitiavana isika ho an'ny rehetra izany fetibe karazana antony. Afa-tsy ny Ultra pantarina ny dikan'ireo hafatra eo amin'ny sehatry ny media sosialy nandritra ny andro vitsivitsy farany, tsaho efa circling momba izay 'The New Normal’ mety hoe. Zahao hoe Pejy Facebook Primavera hahita zavatra holazaina.
Inona no tena tia aza, dia ny fety nampiseho mazava fikasana hamonjy ny orinasa manerana mba hahazoana antoka mitovy ny lahy sy ny vavy fanehoana fandaharana. Izy ireo manolotra ny afisy izay Mahafinaritra le-anjakan'ny lehilahy. Fa angamba zava-dehibe kokoa, dia olona izay drariny mponina amin'ny alalan'ny fifangaroana ny asa isan-karazany izay hita fa tena mba ho mendrika ny fampidirana ny tato ho ato, na inona na inona ny lahy sy ny vavy, genre, na ny taranaka.
Indrindra forgoing ny nentim-paharazana iray na roa isan'andro headliners raikipohy, ny mpikarakara efa feno an-tampon-volavolan-dalàna ho an'ny andro tsirairay amin'ny harena ny talenta, ao anatin'izany ny tiany ny Erykah Badu, nahafolaka Impala, Solange, Future, Cardi B, Interpol, Janelle Monáe, Robyn, amin'ny, Christine sy ny Queens, James Blake, ary Mac DeMarco.
Jereo ny lahatsary raha toa ka mila mandresy lahatra intsony!
Sziget Festival 2019. Budapest, Hongria
Sziget fety no tsara indrindra tany Eoropa teo Amin'ny Nosy Iray ary feno mozika, kolontsaina, fitiavana, ary ny fahafahana! asa! Aiza no sonia? Hold up, andao anao ny tsipiriany vitsivitsy voalohany.
Ny Fetiben'ny Sziget voalohany dia naorina indray tao 1993 toy ny kely mikorana, ary efa nanomboka nivoatra ho isan'ny lehibe indrindra Eoropa mozika fety. Isan-taona dia miezaka ny hitondra Szitizens sasany amin'ny anarana lehibe indrindra avy any, ary hampiantrano ny 1,000 mampiseho manerana 60 dingana, for 7 andro mahitsy. Rehydrate na iza na iza? 😝
Inona no tadiavintsika amin'ity festival ity ary inona no mampiavaka azy ireo ho antsika?
Ary ny lanjan'ny dia nataony teo zavakanto ary koa ny mozika. Misy toerana maro anisan'izany ny fampisehoana, teatra, tranom-bakoka tao an-tanàna, ary ny maro hafa. Artists sy ny mpanakanto avy amin'ny manerana izao tontolo izao mba haneho ny talentany. Misy ihany koa ny fahafahana Szitizens sy ny mpanakanto mba hiara-hiasa mba hamoronana hay hadinoina sy manan-danja sary.
Raha izay tsy mangatsiatsiaka ampy, ry zareo ihany koa Eco-friendly! Miezaka izy ireo mampita an'io hafatra io isaky ny afaka manao izany izy ireo ary miangavy ny mpanatrika fety mba ho tonga saina ara-tontolo iainana.
Mahatsapa aingam-panahy mba hanaraka ny mozika amin'ny alalan'ny Eoropa ka jereo ny tsara indrindra tany Eoropa Festivals? Avy eo ny lamasinina boky tapakila noho ny fanampian'ny Save A Train !
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-festivals-europe%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#Creamfields #Europemusicfestival #Music Festival #lohataona #nosy europetravel festival longtrainjourneys Party trainjourney